Loren ọ bụ transgender? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Cameron transgender - otu esi edozi
Cameron transgender - otu esi edozi
Loren ọ bụ transgender?
Pasadena, California, U.S.LorenRex Cameron (amuru na abali iri-asato na asato, aho 1959) bu onye okacha amara nke America, onye edemedetransgenderonye mmume.
Mmeghachi omume mgbe ndị mmadụ nụrụ na anyị kwesịrị inwe ụmụaka na-ama jijiji ma dị egwu, tupu m gbanwee mgbanwe ahụ, ọ na-efu m dị ka ibe ma ọ naghị adị m mma ma ụjọ na-atụ m ịgwa ndị mụrụ m na onye ọ bụla nwere ike ịbụ onye ha choro na o nweghi nsogbu n’echiche gị bụ na anyị agaghị ekwe ka ihere mee ụmụ anyị ma ọ bụ tụọ ụjọ na ha kwesiri inwe mmetụta na a hụrụ ha n’anya ma nabata ha ka ha wee gbanwee mgbe UM kọwachara ya na ọ ga-apụta na ị bụ mụrụ mmekọahụ ị na-adịghị eche n'obi gị, ụtụtụ ọma na shemales adịghị ka anyị bụ donuts pụtara na ị bụ onye ọzọ na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe gị, nwoke ọzọ karịa ka ị dị mma james ngụsị akwụkwọ nke dị na Fraịde ị na-atụ ụjọ banyere etiti ụlọ akwụkwọ? pụtara mgbanwe nke na-adịghị adịgide adịgide. Ọ ga-eji ya dị ka ya maka nnọchiaha. O mechara gbanwee aha ya n'afọ gara aga na njirimara nwoke na nwanyị iwu ya ee enyi gị nwoke ga-abịakwute m na ya ọ ga-abịa n'ehihie a, ọ ga-abụ ụbọchị na-ekpo ọkụ mgbe m si na ọdọ mmiri ahụ pụta mgbe m bụ nwa nwoke mana emere ka nkem doo anya na klaasị mbụ mgbe m gwara mama m na achọrọ m ntutu m mkpụmkpụ ma na achọrọ m iyi obere nwa nwanyị, yabụ James bịakwutere anyị n'ụzọ nkịtị, na-enye nkọwa site na mgbe ọ dị afọ asaa ruo mgbe ọ dị afọ asatọ. ama o kwuru ihe dika m ọkara nwa, okara nwanyi, ọkara ozodimgba ma echere m na odighi mma dika ikuku dika nne gi m chetara oge o gwara m mgbe ufodu ana adi m ka nwata nwoke ma n'oge ahu amata m nọ na-agba mbọ ịbụ nne na nna na-akwado ma sị ee enwere m mmetụta nwanyị ma m ghọtara nke ahụ na ọ dị mma ịnwe mmetụta nwoke na nwanyị mana wa n'eziokwu, enweghị m nkọwa ndị ahụ, achịcha ndị ahụ tụbara n'akụkụ ya iji nwalee mmiri tupu m gbanwere.
Anọ m na-efu otu nke m ma ọ dị m ka ọ dị mma ma ụjọ na-atụ m ịgwa ndị mụrụ m onye bụ osisi ahụ? Onelọ otu mgbe m gwara ha na ha kwuru na ha nabatara m, enwere m nnukwu ọ happyụ n'ihi na amaara m na ọtụtụ ụmụ trans anaghị enwe nke ahụ na nke ahụ dị mwute, onye mbụ ị gwara ezigbo enyi m, mba, agwara m onye bụ enyi m ma nne na nna ha bụ transphobic ya mere na enweghị m ike ịbụ enyi ha kwuru na ha kwenyere ndị mụrụ ha kamakwa kwenyeere m na eziokwu ma ọ bụrụ na mmadụ echee ụzọ transphobic dị mma mgbe ahụ achọghị m iso gị nwee mmekọrịta naanị malitere ịmịnye ndị na-egbochi homonụ otu ọnwa gara aga ọ bụ implantitis iji gbochie oge uto ya, ọ ga - egbochi usoro ịhụ nsọ na mmepe ara nke ga - abụ ihe na - akpata nrụgide nke uche na nke anụ ahụ mgbe ọ malitere ịmalite ịzụlite mmekọrịta nwoke na nwanyị a, ị nwere ike igosi m ihe mgbochi nke a kụnyere na mbụ yiri, gosi m na ogwe aka gị ebe ọ bara ọgaranya bụ tig? ọ dị ka ọ dị iche na ọ na-akparị gị na ihe nlele ahụ dị ka, ọ dị ka nke a ma ọ na-agụ ụbọchị ruo mgbe ọ nwere ike ịmalite Testos Teron, nke ga-abụ oge mbụ ihe ọ bụla ga-adịgide adịgide ga-eme n'ihi otu oge a, ọ bụrụ na ị na-eji a onye na - egbochi ya ma gazie testosterone, ọ ga - ewute nri gị na àkwá gị agaghị eto mm-hmm ị ga - agabiga site na nwata, ị nwere ike ime ihe dị mma maka nke ahụ, mana achọghị m, achọghị m ihe kpatara ya, n'ihi na ọ bụ ihe jọgburu onwe ya iche na m bụ nwoke, ọ dịkwa ka ụfọdụ ndị ọzọ na-eche echiche ịbụ nwanyị na-enweghị ntụsara ahụ na ị na-ekwukarị na ị chọrọ ịbụ nne na nna, ee, yabụ kedu ihe ị ga-eme banyere ya ma ọ bụrụ ị nwere ike? Ọ bụ nnukwu echiche ịmịnye nwa gị bụ nnukwu echiche nye m, ndị mmadụ na-eche mgbe ụfọdụ ma ọ bụrụ na ị dị obere ịmara ma ọ bụrụ na ị bụ trans ee na kedu ka ha si eto eto ịmara na enwere? Ọ dị mma ịbụ trans nke dị ịtụnanya echere m na ọ pere mpe nke mere ka ọ dịrị ya mfe ịpụta gwa nne na nna m n'ihi na ọ ma na ha ga-anabata ọdịda anyanwụ n'ezie jiri aha ahụ bịa yana nke ahụ bụ m oonlight n'ezie bịara na Aha ahụ gbagoro ugboro abụọ Olivia kwuru na ọ bụ transgender site na afọ anọ ruo ise ma anyị hapụrụ ya ka ọ eyi ihe ọ chọrọ, mana ọ kwabeghị ọha mmadụ wee bịa ruo mgbe ọ dị afọ ise n'ụlọ akwụkwọ ọta akara m ga-asị na ọ bụ ihe na-awụ akpata oyi n'ahụ n'ihi na anyị ka nwere mgbanwe nwa anyị ka amụkwara banyere okike. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na ọ ga-abụrịrị ọnọdụ nnomi nnomi nke ndị ntà na-e mimomi ndị okenye ma chee na ndị okenye na-enweta ụdị otuto ma ọ bụ nzaghachi ma ha chọrọ otu uche ahụ, nke nwere uche, nke mere anyị na-ala azụ ilebanye anya na ịbanye n'ime mgbanwe mmekọrịta ọzọ, mana nke ahụ bụ ebe a anyị nọ. Azara m mgbanwe nke Olivia dị ka ọtụtụ ụmụnne ndị okenye ga-eme, ụdị a bụ, mana n'ezie, ọ bụ ezie na m bụ onye ntụgharị, enwetara m ihe nchebe na-eche na ọ bụ nke m mana ugbu a, m hụrụ ma hụ mgbe niile ma ọ bụ na Olivia bụ nwa agbọghọ na ọ ga-abụ nwanyị, ọ nyeere m aka site n'ime ka m nwee obi ike n'ihi na ị maghị na m dị ka onye mbụ na-akwado m, ya mere enwere m obi ike na m ka nwere ike ime ọtụtụ mmekọrịta anyị dị mma ọ dị ka ọtụtụ ụmụnne anyị na-arụ ụka mana ọ nweghị ihe dị mkpa echeghị m na ọ kachasị mma mana echere m na anyị na-eme nke ọma ma ọ bụrụ na anyị emeghị ya, ọ nwere ike ọ gaghị anọ na-ewe iwe na ibe anyị ruo mgbe ebighi ebi n'ihi na anyị enweghị ike ijikọ Olivia.
Ọ dị obere, ọ dị naanị asaa. Nke mbụ ga - abụ ihe mgbochi hormone ma naanị mgbe ị rutere nke abụọ nke oge uto site ugbu a gaa n'ihu, anyị na - agbaso ụzọ ha. Ọ dị mma, ka anyị pụọ ma anyị bụ nne na nna nye gị nke chere na anyị na - achụ ụmụ anyị. na onweghi ihe emere onye obula nke siri na anyi na emegharia ihe ozo, agam juo ha ka ha lee umu ha anya ma oburu na ha achoghi uzo ha gha hu nwa gi n'anya ma nkwenye gi ma obu egwu ha di nkpa karia ka i si elebara anya nke gi anya. 'lee m anya, lee onwe gị, anyị na-eme nke a n'ihi na anyị na-ege ụmụ anyị ntị ma na-agba ụta n'ihi na anyị na-eme ọtụtụ nyocha na nyocha egosila na anyị na-eme ihe ziri ezi, amụtala m ọnụ ọgụgụ egwu banyere ihe na-eme mgbe ịbụ nne na nna Transgender na-anaghị akwado ma ọ bụ na-enweghị obi abụọ na anyị nwere ma ọ bụ na-echegbu onwe anyị na naanị ihe ụmụ anyị nwere ike ma kwesịrị na ọ ga-eche banyere anyị Ga-abụ ịhụnanya na nnabata. Enwere usoro iru uju nye m ka ụmụ m abụọ gbanwere, ọ bụghị n'ihi na ahụghịzi m nwa m n'anya na enweghị m ihe ọ bụla gbasara ya.
Na o metụtara ime ka ụwa m na-amaghị mara dị ezigbo ụjọ ma oge m mụtara ịtụkwasị obi na enwere obodo nọ ebe ahụ iji kwado ma nke a bụ eziokwu, ọtụtụ mmadụ nwere nchegbu na nke a nwere ike bụrụ mpaghara ma n'ikpeazụ nke a nwere ike ọ gaghị abụ ihe ha bụ mana ịmara na ha ga-ahụta ịhụnanya na ịnabata anyị bụ isi ihe, anyị ga-ahụ ha n'anya ma nabata ha mgbe ha bịakwutere anyị wee sị na ha agbanweela obi ha, anyị ga-ahụ n'anya ha ma nabata mgbe ha na-emeghị ma anyị na ha na-enwe obi ụtọ na ha na-adabere na okike na aha na nnọchiaha na ọ nweghị ụdị nke kachasị mkpa nke Ige ndị obodo transgender ntị maka onwe gị n'ihi na anyị anaghị ebi ndụ na ahụmịhe a, anyị bụ nne na nna nke ndị a bụ otu n'ime ihe ndị kachasị ama banyere ha, ha abụọ dị ịtụnanya na ọ bụghị n'ihi na ha bụ ndị trans, na mgbakwunye, ha na-atọ ọchị ma nwee amamihe ma nwee nzuzu ma na-elekọta ma hu ezin’ulo m na obi ebere m Ndị enyi m ọtụtụ ihe na-eme m, anyị abụghị ndị dị iche na anyị ekwesịghị ịgwọ ma ọ bụ ka njọ karịa n'ozuzu m enwere nnukwu obi ụtọ h ọnọdụ m nwere ihe niile m nwere ike ịchọrọ, ọkachasị na ọbịbịa m -out na ebe m nọ ugbu a, I nwee nkwado niile n’aka Ineedyou
Kedu ihe na-akpata transgenderism?
Ntugharindị mmadụ nwere njirimara nwoke na nwanyị adabaghị na mmekọ nwoke na nwanyị ekenye ha, na-ebutekarị na dysphoria nke nwoke. Nana-akpatanke transsexuality amụọla ọtụtụ iri afọ. Ihe ndị a na-amụkarị bụ ihe ndị dị ndụ, karịsịa ụbụrụ dị iche iche gbasara usoro ọmụmụ na usoro mmekọahụ.
Enwere ọtụtụ ihe ọmụma na-ezighi ezi n'ebe ahụ banyere ihe ọ pụtara ịbụ transgender, mana n'oge na-adịbeghị anya ndị ọkà mmụta sayensị amalitela igwu ala n'ime omimi, physiology, na akparamaagwa n'azụ ya. Yabụ taa, anyị ga-emebi ihe sayensị mara n'ụzọ nkwanye ugwu na mmụta, Hey ụmụ okorobịa! Abụ m Gigi mara mma, ma taa m nọ na ASAPScience iji kwatuo 'Sayensị nke abụ Onye Transgender'. Tupu anyị abanye na nke ahụ, anyị kwesịrị ile anya na mkpụrụ ndụ ihe nketa gị.
Ma ọ bụ chromosomes ndị ị nwere mgbe njikọta spam nwoke na akwa nwanyị. Mgbe mkpụrụ ndụ spam nna gị, nke nwere 'X' ma ọ bụ 'Y' chromosome, jikọtara ya na akwa egg cell nke nwere chromosome 'X'. Mana ruo izu isii ma ọ bụ asaa n’ime njikọta spam nwoke na nwanyị nwanyị gachara, embrayo ‘XY’ na ‘XX’ nwere gonads yiri nke ahụ.
Ihe dị ka izu asaa akụkụ ahụ ịmụ nwa na-amalite ịmalite site na mkpụrụ ndụ ihe nketa na 'Y' chromosome a na-akpọ 'SRY' nke na - eme ka mkpụrụ ndụ bụrụ ọkachamara na sel ndị a na - emepụta 'testosterone' nke na - amalitekwa usoro ahụ dị ka amụ na - akpalite na akpịrị. Ọ bụ ezie na mkpụrụ ndụ ndị ọzọ na - egbochi mmepe nwanyị site na imebi nsụgharị nke ụmụ nwanyị, agbanyeghị na mmepe nwanyị n'ihi na enweghị 'Y' chromosome nwere mkpụrụ ndụ 'SRY'. Akụkụ ndị a ka na-emebi emebi ma ejiri enyemaka nke.
Eriri akpa nwa, ikpu elu, na tublopian tubes Estrogen na kemịkalụ nke akụrụ mmalite. Mana ọ naghị adịkarị mfe. Oge ụfọdụ enwere RAR COMBINATIONS dị ka 'XXY'. XXX '' XXYY 'wdg Ọbụna ndị nwere' XX 'Chromosomes nke na-etolite akụkụ nwoke na nwanyị dị iche iche N'ihi otu akụkụ nke' Y 'chromosome na-apụ, ma gbanwee ebe na' X 'chromosome. Ma mmekọrịta dị iche iche na ụbụrụ, N'ezie na-eme ogologo oge karịa Gonadal Differentiation na Ee, n'agbanyeghị, ọ bụ ezie na esemokwuMale na Nwanyi ụbụrụ na-arụ ọrụ na arụmọrụ dị n'etiti ibe ha.Ọzụzụ achọpụtawo na ụmụ nwanyị n'ozuzu ha nwere nnukwu cerebrumcerebellum na hippo campus. Ebe ụmụ nwanyị nwere oke njupụta n'akụkụ aka ekpe, na nnukwu mpịakọta na Ọtụtụ ọmụmụ egosila na ụbụrụ transgender bụ ihe nrụpụta ma rụọ ọrụ yirịrị njirimara nwoke ma ọ bụ nwanyị ha nwere mmekọrịta nwoke na nwanyị. Otu nnyocha chọpụtara na ụmụ nwanyị transwomen n'agbanyeghị na e kenyere ha nwoke mgbe amụrụ ha. obere usoro nke nwanyi na hypothalamus.MRI nyocha na egosiputa ihe omuma nke ndi mmadu N'ikpeazụ ka pheromone Androstadienone na-akpata nzaghachi hypothalamic dị iche na ụbụrụ nwoke na nwanyị Ma mgbe ndị mmadụ 'Gender Dysphoria' kpughere ya, nzaghachi hypothalamic kwekọrọ na okike ha ghọtara karịa mmekọahụ ha. Nnyocha ndị a na-enyere aka ịkọwapụta ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị nke Gonadsis abụghị mgbe niile dị ka ụbụrụ na na enwere ọdịiche dị n'etiti mmekọahụ gị ma ọ bụ anatomya gị na okike gị ma ọ bụ otu ị siri ghọta ahụ gị. E nwekwara ihe dị ka mkpụrụ ndụ ihe nketa iji nweta njirimara transgender. akụkọ ihe mere eme nke ezinụlọ, njirimara nwoke na nwanyị na-emekọ ihe ọnụ na-agba ọsọ n'ezinụlọ, nke pụtara na ha nwere ike ketara '' CYP17 'gene nke na-achịkwa ogo ahụ nke nwoke na nwanyị nwere mgbanwe gbanwere nke egosiputara na nwoke trans. Ọ bụ ezie na enwere ike imekwu nyocha, ndị sayensị nọ ugbu a na-ele ihe kariri Nde Nde DNA maka transgender njirimara inyocha g ọ bụla Ọ bụ ezie na ọmụmụ sayensị na-egosi ahụmịhe nke ndị transgender, a ka na-ata ahụhụ site na nrụgide na nchekasị karịa ọha na eze. Ihe egwu nke igbu onwe onye kacha pụta ìhè na transgender ndị ndị ezinụlọ ha jụrụ oke na-enweghị oke na ọrụ ha, ma ọ bụ na nlekọta ahụike. Riskstụ aro na dysphoria okike nwere ike ibute oke mmetụta uche ruo n'ókè nke igbu onwe gị. Ọ bụrụ na gị, onye otu ezinụlọ, ma ọ bụ enyi na-esite na ọrịa dysphoria nke nwoke, enwere njikọ ole na ole na nkọwa ahụ maka ozi ndị ọzọ. Daalụ nke ukwuu Gigifor ịbụ akụkụ nke vidiyo a, ọ pụtara nke ukwuu ma anyị nwere obi ụtọ na ị bịara ebe a iji mee nke a na anyị. GIGI: Ah, daalụ maka ụmụ okorobịa maka iji ọwa unu, ihe ngosi gị na-egosi ahụmịhe transgender na sayensị nke ọ na-eweta nso. Ọ bụrụ na ị chọrọ ile Gigi's Channel, anyị ga-etinye njikọ na onye nkọwa na ihuenyo ma ọ bụghị nke ọzọ, ị nwere ike ịdenye aha maka izu ụka ọ bụla na sayensị, anyị ga-ahụ gị oge ọzọ.
Kedu ka isi mara ma ị bụ transgender?
Agbanyeghị, ụfọdụ ihe nwere ike igosipụta nke ahụNtughariNjirimara:Ọ bụrụ na ịadịchaghị mmamgbe olea ga-akpọ ya nwata nwoke ma ọ bụ nwa agbọghọ ma ọ bụ nwoke / nwanyị.Mgbe olea na-eji nnochiaha na-ezighi ezi akọwa yagị, o nwekwara ike ịkpata ahụ erughị ala. Peoplefọdụ ndị nwere ike iche na ahụ ha ekwekọghị na ebuli onwe ha sitere n'obi.
You bụ transgender? Kedu ka isi mara ma ị bụ transgender? Ka anyị kwuo maka ya ugbu a. Lee mmadụ niile! Anyị na-aga ịtụle otu ị ga - esi mara ma ị bụrụ transgender. Dịka ịjụ onwe gị, biko mara na abụghị m dọkịta na enweghị m ike ịchọpụta gị. Ọzọkwa, ejila ozi a iji chọpụta onwe gị. Ozi a na-egosi ndị mmadụ tozuru oke iji kpebie nke ha ma ọ bụrụ na ha bụ transgender. Enweghị m ike ijide gị ma ọ bụrụ na ị bụ nwata ma ị nweta ozi sitere na vidiyo a na-egosighi gị nke ọma. Ọ bụrụ n’echiche na ị bụ transgender, ma ọ bụ dị iche na ihe a mụrụ gị, ndụmọdụ kachasị mma m nwere ike inye tupu anyị ebido nke a bụ ịchịkọta echiche gị ma chọpụta ihe ịchọrọ. Naanị ị nwere ike ikpebi nke ahụ. Ọ bụ ezie na ozi dị na ntanetị nwere ike inyere gị aka ịza ụfọdụ azịza, ị nweghị ike ịdabere na ya iji kọwaa gị. Naanị ị nwere ike ịkọwapụta onye ị bụ. Site na iche echiche nke ọma na oge, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị bụ nwata ma etobeghị iwu ịme mkpebi gị, nsogbu transgender nwere ike idozi onwe ha na enweghị enyemaka ọ bụla. Transgender bu okwu eji ede mmadu ndi n’egosiputa ihe di ka omumu omumu ozo. Iji maa atụ, amụrụ m nwoke mana mata dịka nke nwanyị wee gbanwee wee biri ndụ m dịka nwanyị. Ọ bụghị mmadụ niile ga - agbanwe ma enwere ọkwa dị iche iche nke dysphoria ha na - eche. Dysphoria nke nwoke na nwanyị, nke a makwaara dị ka nsogbu nwoke na nwanyị, bụ akara ngosi iji gosi ma ị bụ transgender. Dysphoria nke nwoke na nwanyị bụ mgbe mmadụ enweghị ahụ iru ala na mmekọahụ a mụrụ ha ma gosipụta dị ka nwoke na nwanyị ọzọ. Y’oburu n’inweghi omumu nwoke na nwanyi, o yikariri ka ibu transgender. Ihe kpatara nka a nihi na nke a bu njiri mara nke na akowa ndi transgenderpe. O nwere ike ịbụ obere ma ọ bụ njọ. Ihe na egosiputa gi dika nwoke ma obu nwanyi, aru gi, nmekorita gi na ibe gi, ihe obula i n’enweghi obi uto dika o siri metuta nwoke na nwanyi. Enwere m vidiyo nke raara nye ezigbo okike nke nwoke na nwanyị, yabụ enwere m nkọwa na njikọ na ndenye ederede ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịlele nke ahụ. Fọdụ ndị na-achọ iji tụnyere transgender na nke bodydysmorphic disorder, nke bụ nsogbu uche nke onye ọ bụla na-eche banyere ntụpọ na ahụ anụ ahụ ya. Ọ bụrụ na anyị elee anya na dysphoria nke nwoke na nwanyị, ọ dị nnọọ ka ọ dị oke mkpa na nke ọmụmụ ọmụmụ mmadụ na-adabaghị na nwoke ma ọ bụ nwanyị ha matara dị ka. Ikekwe ọ bụ ara gị ma ọ bụ enweghị ederede, akụkụ ahụ nwoke, olu miri emi ma ọ bụ nke na-abụghị nke miri emi, ihu ma ọ bụ enweghị ntutu ihu, wdg. Ihe ndị na-akọwa nwoke na nwanyị na ọkwa ndụ na mgbanwe ndị na-esite n'oge nha. Ndị nwoke nwere amụ, na ọkpụkpụ ndị ọzọ na-agbanwe, ebe ụmụ nwanyị nwere ara na ikpu, yana ọkpụkpụ ndị ọzọ na-agbanwe niile n'oge oge uto. Yabụ ka onye trans wee merie nke a, ha ga-agbanwe iji belata ọrịa ahụ. Ọ bụ ya mere ọnya dysphoria bụ ọnụọgụ nọmba. Ọrịa dysphoria nke mmadụ nwere ike ịdị iche site na ọ bụghị nke ukwuu na egwu ndụ. Na inyefe nwere ike ịbụ naanị ụzọ iji belata nke ahụ. Transfọdụ ndị trans nwere ike ọ gaghị agbanwe ihe niile, ebe ndị ọzọ na-agafe homonụ na ịwa ahụ. Onweghi ihe di ka 'trans trans' ma obu 'obughi uzo zuru oke' nke ana eche transgender. Ọ bụrụhaala na ị na-enweta dysphoriarelated na njirimara ndị na-akọwa gị dị ka mmekọahụ ị mụrụ site na ị naghị amata nke ahụ, mgbe ahụ ị bụ transgender. Ma olee otu ị si mara na ị na-enwe dysphoria? Ikekwe ihe adịghị atọ gị ụtọ n'ihi na ọ metụtara mmekọahụ ị mụrụ na oge uto gị. Ọ bụrụ na a mụrụ gị nwoke wee bụrụ nwoke, ọ bụrụ na ị bụ nwoke ma ọ bụ nwoke, ọ bụrụ na ị bụ nwoke ma ọ bụ nwoke, ọ bụrụ na ị bụ nwoke ma ọ bụ nwoke, ọ bụrụ na ị bụ nwoke ma ọ bụ na ị bụ nwoke, ọ bụrụ na ị bụ nwoke ma ọ bụ na-eto eto, ọ bụrụ na ị bụ nwoke ma ọ bụ na-akpakọrịta, ọ bụrụ na ị bụ nwoke ma ọ bụ nwoke, ma ọ bụ na ị gaghị eso nwoke, Ikekwe uwe ụmụ nwanyị na-amasị gị, etemeete, àgwà ndị ọzọ ị chere na-eme ka ụmụ nwanyị bụrụ nwanyị. Ikekwe oburu na amuru gi site na nwanyi rue oge obula, n'adighi ka ara gi na ochicho inwe kari obi nwoke. Ihe obula i chere i dara n'udi nwoke na nwanyi. Nanị ụzọ ị ga-esi amata bụ ma ọ bụrụ na ịnwale ya n'ezie. Maka ndi mmadu ndi nyefere aka na mmekorita nwoke na nwanyi ha amuru dika, obughi ihe omimi nye ha ka ha chee echiche. Ma eleghị anya, ha na-anwale uwe ma na-ahụ ihe ọ dị ka, etemeete, ịmịnye ihe, njikọta, ihe ọ bụla ọzọ, tupu ha agafee na mgbanwe. Ikwesighi igbanwe ka o buru onye transgender, mana ndi mmadu na-agbanwe mgbe nile n’uzo obula n’otu ha si gosi onwe ha na uwa. Gbanwe ọbụna obere ihe ha chere dị mkpa maka ha iji belata dysphoria. Kedu ihe ga - esi dị iche na ịbụ nwoke idina nwoke? Ka anyi kwuo na nwoke nwere mmasị nwoke adighi enwe mmasị n'ihe nwoke dika nwoke ma obu ikekwe n'uwe nwanyi. Naanị n'ihi na ha nwere ike igosipụta akụkụ nke onwe ha dị ka nke nwanyị, apụtaghị na ha nwere dysphoria metụtara nwoke na nwanyị. Nwoke nwere mmasị nwoke ga-amata na ọ bụ nwoke n'agbanyeghị ihe mmasị ya bụ. Ọ naghị eche na ọ dị mkpa ka ndị mmadụ kpọọ ya 'ya' ma ọ bụ bụrụ ndị ọha mmadụ na-ahụta dị ka nwanyị. Kama nke ahụ, ọ nwere ike ịhazigharị dịka ụfọdụ ihe ụmụ nwanyị. Nke ahụ bụ nnukwu esemokwu ebe ọ bụrụ na onye a bụ onye transgender, ha ga-amata ihe ọzọ karịa nwoke ma chọọ ka a ghọta ha dị iche karịa nwoke sitere na ndị ọzọ. Kedu ihe na-eme someonetransgender? Somefọdụ na-ekwu na ọ metụtara mgbanwe mgbanwe homonụ n'afọ tupu a mụọ ya, ikekwe ọbụna metụtara nri nke ọzọ n'oge ime ime, yana mgbanwe mgbanwe ahụike ndị ọzọ na-eme tupu nwa ọhụrụ etolite site na akụkụ nwoke na nwanyị na ụbụrụ ya. Ndị ọzọ na-ekwu na ọ bụ nsogbu uche, na-abụkarị nkewa, nke sitere na trauma na mmegbu, nleghara anya na nhapụ nke onye ọzọ ma ọ bụ nna nna, na ihe ndị ọzọ. Ọbụna ụfọdụ kwenyere na ọ bụ ihe ndị metụtara gburugburu ebe obibi tupu oge uto, dị ka nsị na nri, mmiri, ikuku, ahaghị nha hormone, ma ọ bụ nwatakịrị ahụ na-etinye aka na isiokwu transgender tupu ha aghọta ya, ọtụtụ mgbe site na nyocha andntanetị na ndị mụrụ ha anaghị akọwara ha ya. Gịnị ma ọ bụrụ na m gwara gị na akụkọ ifo niile nwere ike ịme mmetụta na mmepe nke mmetụta transgender. Onye ọ bụla nwere mmetụta transgender maka ebumnuche dị iche. Maka ụfọdụ ndị trans, ha na-aghọta ya dị ka onye na-eche echiche, ma chọpụta na ọ bụ n'ihi oge gara aga ha emeela ka mmetụta ndị a nwee. Ndị ọzọ enwetụbeghị ụdị nsogbu mberede a na ikekwe ọ bụ ihe ọzọ kpatara ya. Enwere ọtụtụ ihe kpatara ya ma ọ nweghị otu dabara niile, onye ọ bụla dị iche. Ọ bụghị onye ọ bụla transgender bụ nwoke na nwanyị, n'ihi na ha mata dị ka ndị ọzọ sexthey mụrụ dị ka. Enwere ndi ozo di iche iche ndi mmadu choputara dika nke a wezuga onwe ha na nwoke na nwanyi .Ma, mgbe ị na-amụ ihe a, ọ naghị abụkarị ndị nwoke na nwanyị, kama ọ bụ ọdịiche nke nwoke na nwanyị. Nwere ike ịchọpụta dịka kpamkpam na njedebe nwoke ma ọ bụ kpamkpam na nwanyị, amụrụ gị n'otu njedebe ma chọpụta na njedebe nke ọzọ, ọhụụ na-agbanwe n'etiti isi abụọ a, nwoke na nwanyị, n'oge na-adịghịkwa anya. Mana ịgọnahụ ahụmịhe mmadụ, na nwoke na nwanyị na nwanyị dị na mbara ụwa a, na-egosi na enwere ike bụrụ nsogbu miri emi karị. Anyị niile nwere akụkụ nwoke na nwanyị nke onwe anyị nke dị n'ime anyị. Anyi bu umu nwoke na umu nwanyi na mbara uwa a nihi na otua ka anyi, ndi asmammal si meputa. Anyị na-echefu echiche a dị oke mkpa, nke na-eyi ụmụ anụmanụ bi na thiswa a na ụdị anụ ndị ọzọ niile. Anyị aghọwo oge iji bụrụ ndị nwere ọgụgụ isi anyị bụ taa, mana nwere ọgụgụ isi iji jụ etu anyị siri nwee isi ebe a, mgbọrọgwụ anyị, nke bụ nwoke na nwanyị. Ọ bụrụ na ị kwenyere na anyị nwere mmụọ dịka akụkụ nke amaghị ihe, ọ bụ Ọ na-abụkarị nwoke na nwanyị na enweghị mmekọahụ ebe ụmụ nwanyị na ụmụ nwanyị nọ ebe a n'uwa a dị ka ụzọ kachasị emetụ n'ahụ ma na-aga n'ihu na mgbanwe nke ụdị. Na-enweghị nwoke na nwanyị, yana ikike ịmụba na ikpu amụ, spam na akwa, mgbe ahụ ụdị anyị ga-anwụ. . Ihe kachasị m chọrọ ikwu bụ na site na nkwupụta ndị mmadụ hapụrụ na vidiyo m, enwere okwu ole na ole na-ese n'elu na m chọrọ ikwu. Otu ịbụ 'transtrender.' E kwesiri iji okwu a kọwaa ndị na-achọpụta astransgender n'ihi omume na nlebara anya, na ọ gaghị enwe ọhụụ ọ bụla dysphoria. Na okwu ozo 'truscum' ejiri mee ka ndi transgender na-achota ndi mmadu ndi na-eche na nwoke na nwanyi dysphoria bu ihe di nkpa ka oburu transgender. E boro m ebubo nke ikpeazụ. Okwu abuo a mejuputara ma obu don'texist. Amaghị m ebe ha si bịa, onye mebere ha, achọghịkwa m ịma gbasara ha. Achọpụtara m na ha dị mkpa na mpaghara ọ bụla ka ha anaghị etinye aka na mpaghara ọ bụla. Otu onye nwere ike ịchọpụta dị ka ihe ọ bụla masịrị ha, mana okwu a bụ transgender enweghị ike gbanwee ka ọ dabaa na mkpa nke ndị a 'transtrender' ndị a. Site na myobservation, ọ dị ka ndị akpọrọ as'transtrender 'ndị mmadụ n'otu n'otu bụ ndị na-ejikarị okwu ahụ bụ' turubcum 'mee ihere ihere nye ndị na-eche na dysphoria na mkpebi ikpe ha na-enweta n'ihi na ha anaghị ahụ dysphoria ma ghara itinye aka na ya, na-agbakarị mbọ tozuru na-akpọ onwe ha transgender mgbe ha na-eme omume. Gaghị enwe nkụda mmụọ na-enweghị mmetụta nke nrụrụ ọkụ, ma ọ bụ ị nwere ike ịnwe nrụgide post-traumatic na-enweghị nsogbu trauma gara aga, wdg. Ya mere, a na-akọwa transgender labelof dị ka dysphoria okike. Ọbụna minordysphoria ka nwere ike ịkọwapụta, mana ịnwale ihe ọ bụla dị mfe pụtara na ị bụghị transgender. Ana m echebara ihe kpatara nsogbu ahụ echiche, na-agwa ha okwu ma na-emeri ha. Maka ụfọdụ ndị transgender, mmetụta nke ịchọ ịbụ onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe ha bụ ịhapụ ma kewapụ onwe ha site na mmekọahụ ọmụmụ ha, ikekwe n'ihi nsogbu na / ma ọ bụ ịkpọasị nke onwe ha. Ndị a nwere ike ịbụ ndị transgender n'ihi ọnọdụ uche, na-abụghị ọnọdụ ọnọdụ ahụike. Agbanyeghị, mmetụta ndị a dị adị nke ukwuu na ọbụlagodi na nsogbu ndị gara aga na ịnagide ụdị nkewapụ iche nwere ike ọ gaghị ezuru ụfọdụ ma na-agbanwe n'ụzọ ụfọdụ nwere ike inyere aka iji belata dysphoria jikọtara ọnọdụ a. Ya mere nkwubi okwu ebe a bụ na ịbụ transgenderis abụghị otu nha dabara niile. Enwere esemokwu na ahụmịhe mmadụ dịgasị iche iche nke dysphoria okike. Ihe ọ bụla ị na-eche na ị bụ, nwalee ya na-ahụ otú ị na-amasị ya. Naanị gị nwere ike ịkọwapụta onwe gị yana etu obi dị gị. Ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ ntinye ndị ọzọ n'okwu a, m ga-achọ ịnụ ya ya biko biko nweere onwe gị ịhapụ okwu ma mee ka m mara ihe ị kwenyere, ma / ma ọ bụ otu esi enyere gị ma ọ bụ onye ọzọ aka ịbịaru gị nso. Echere m na ozi a ga-enyere gị aka ma nyere gị aka. Nwee ọmarịcha ụbọchị! Daalụ maka ikiri vidio m! Ọ bụrụ n'ịchọrọ ọdịnaya ndị ọzọ, biko nweere onwe gị ịdenye aha.
Kedu ka m ga-esi bụrụ transgender?
IjiNtugharinatranssexualN'ime ụmụ mmadụ, usoro a n'ozuzu ya gụnyere ọgwụgwọ nhazigharị (nke nwere ike ịgụnye ọgwụgwọ na-agbanwe ọgwụ na ịwa ahụ gbasara mmekọahụ) ebe njirimara nwoke na nwanyị dị iche na nke mmekọahụ na okike metụtara ọmụmụ ha.